ပိုက်ဆံက ဘက်တီးရီးယားတွေ ဖုံးနေတယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုပြင်မလဲ။ - ကျန်းမာသောလူနေမှု 2022
ပိုက်ဆံက ဘက်တီးရီးယားတွေ ဖုံးနေတယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုပြင်မလဲ။
ငွေကြေးသည် အခြေအနေ သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ လူတို့သည် လက်ဗလာဖြင့် ကောက်ယူရမည့် တစ်ခုတည်းသောအရာနှင့်သာ သက်ဆိုင်ပါသည်။ အနားယူရန် ရပ်တန့်ထားသော ရေချိုးခန်းထဲတွင် ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ဒေါ်လာ ၅၀ တန် ငွေစက္ကူကို မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်ပါ။ ၎င်းသည် တပြင်လုံး သိသိသာသာ ဖြတ်သွားကာ စုတ်ပြဲနေပြီး ယခု ချစ်စဖွယ် အညိုရောင် အရိပ်တစ်ခု ဖြစ်လာသည်။ ဖြစ်နိုင်ချေကတော့ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ 15 မိနစ်တောင် မနေနိုင်ဘဲ ဘယ်လောက်ပဲ ကြည့်ကောင်းနေပါစေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေချိုးခန်းကြမ်းပြင်များမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ငွေကို မလိုအပ်သော်လည်း၊ ပျမ်းမျှဒေါ်လာငွေစာရင်းရှိ ပိုးမွှားများနှင့် ရောဂါပိုးမွှားများပမာဏသည် ယင်းကို အကြံပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အချို့သောနိုင်ငံများသည် ၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းသောငွေကြေးကို သန့်စင်ရန်အစီအမံများလုပ်ဆောင်နေကြသော်လည်း ငွေကြေးကို အမြုံမဖြစ်စေရန် ဤနည်းပညာများ မည်မျှအောင်မြင်သနည်း။
New York University မှ Dirty Money Project မှ ဦးဆောင်သုတေသီ Jane Carlton ၏ အဆိုအရ ဒေါ်လာတစ်ဒေါ်လာစီသည် ၎င်း၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ဘက်တီးရီးယားအမျိုးအစားထောင်ပေါင်းများစွာကို သယ်ဆောင်သွားပါသည်။ ဘက်တီးရီးယား အများစုသည် အန္တရာယ်မရှိသော်လည်း အချို့မှာ မဖြစ်ပွားပါ။ သူမ၏ပရောဂျက်သည် US ငွေစက္ကူပေါ်တွင်နေထိုင်သောသက်ရှိအမျိုးအစားများကိုပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ရှုလေ့လာရန်ရည်ရွယ်ပြီးကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအားသတင်းအချက်အလတ်များပေးဆောင်ရန်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုဝေးဝေးမပြန့်ပွားမီရောဂါဖြစ်ပွားမှုဖြစ်ပွားစေရန်ကူညီပေးနိုင်သည်။ "ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြောက်လန့်တကြားဖြစ်ရန် မကြိုးစားဘဲ၊ သို့မဟုတ် လူတိုင်းထွက်သွားပြီး ၎င်းတို့၏ပိုက်ဆံများကို မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်လုပ်ရန် အကြံပြုခြင်းမဟုတ်သော်လည်း၊ နယူးယောက်စီးတီးရှိ ဒေါ်လာ 1 ဘေလ်အချို့သည် အမှန်တကယ် ဆိုးရွားကြောင်း ကျွန်ုပ် ဝန်ခံရမည်" ဟု Carlton မှ WYSO သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ ငွေပေါ်ရှိ ဘက်တီးရီးယားအချို့တွင် ပါးစပ်နှင့် မိန်းမကိုယ်မှ ရောဂါပိုးမွှားများနှင့် anthrax ခြေရာများပင် ပါဝင်ကြောင်း သုတေသီက ရှင်းပြသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ဘဏ်ဆရာများသည် ဟောင်းနွမ်းပြီး ညစ်ပတ်သောငွေများကို လက်ခံပြီး လည်ပတ်မှုမှ ဆွဲထုတ်နိုင်ရန် ဘေးဘက်တွင်ထားကြသည်။ သို့သော် ညစ်ညမ်းနေသောငွေကို သိသိသာသာ လက်ခံရန် ငြင်းဆိုခွင့်ရှိသည်။ လက်ရှိတွင် သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ရောဂါပိုးမွှားများကူးစက်ခြင်းနှင့် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို လှုံ့ဆော်ပေးရာတွင် ငွေကြေးမည်မျှပါဝင်သည်ကို မသေချာသေးသော်လည်း အချို့နိုင်ငံများတွင် ယင်းအန္တရာယ်ကို လျှော့ချရန် ကြိုးပမ်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ပလပ်စတစ်ငွေကြေးဆိုင်ရာ အယူအဆကို ကနေဒါနိုင်ငံတွင် ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ The Telegraph ၏အဆိုအရ ထိုအချိန်မှစ၍ ပါပူနယူးဂီနီ၊ ရိုမေးနီးယား၊ နယူးဇီလန်နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့ အပါအဝင် အခြားနိုင်ငံများသည် ပလတ်စတစ်ငွေစက္ကူများကို စတင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဂရိတ်ဗြိတိန်သည် ချည်အခြေခံငွေစက္ကူများကို နှစ်ပေါင်း 300 ကျော်ကြာပြီးနောက် 2016 ခုနှစ်မှစတင်ကာ ပလတ်စတစ်ငွေကြေးသို့ စတင်ပြောင်းလဲတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ အမှန်တကယ်အားဖြင့် ပလတ်စတစ်ပေါ်လီမာဖလင်ဟုခေါ်သော ပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ပလတ်စတစ်ငွေစက္ကူများသည် ရိုးရာစက္ကူဘေလ်များထက် ပိုမိုသန့်ရှင်းကြောင်း ကြော်ငြာထားသည်။. ဩစတေးလျနိုင်ငံရှိ Ballarat တက္ကသိုလ်မှ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ပိုလီမာငွေစက္ကူများတွင် ဘက်တီးရီးယားပိုးများသည် ချည်သားအခြေခံသည့်အရာများထက် ပိုလီမာငွေစက္ကူများတွင် နည်းပါးကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ "ပိုလီမာမှတ်စုတစ်ခု၏အချက်မှာ၎င်းသည်စုပ်ယူခြင်းမရှိပါ။ ကျန်းမာရေးပြဿနာဖြစ်တဲ့ သန့်ရှင်းမှုဟာ အကျိုးကျေးဇူးရှိပါတယ်” ဟု နိုင်ငံပေါင်း ၂၃ နိုင်ငံအတွက် ဘဏ်ငွေစက္ကူထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ Philippe Etienne က The Wall Street Journal သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဆန့်ကျင်ဘက် လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ဘက်တီးရီးယားအချို့သည် ချည်သားအခြေခံထားသော ပေါ်လီမာငွေစက္ကူများထက် ပိုလီမာဘဏ်ငွေစက္ကူများတွင် ပိုမိုရှင်သန်နိုင်သည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ လေ့လာမှုတွင် ပေါ်လီမာဖွဲ့စည်းပုံသည် ဆေးဝါးအများအပြားကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော ရောဂါပိုးများ ကြီးထွားခြင်းနှင့် ကူးစက်ခြင်းအတွက် ခွင့်ပြုထားကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ချည်အခြေခံထားသောငွေသည် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုတွင် များစွာမကောင်းမွန်ကြောင်းကိုလည်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဂျပန်တွင် ၁၉၉၀ ခုနှစ်များအလယ်ပိုင်းတွင် Hitachi ဟုခေါ်သော ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် ဘဏ်ငွေစက္ကူများကို ပိုးသတ်မည့် ATM စက်ကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ Forbes ၏ အဆိုအရ ၎င်းတို့ကို ၃၉၂ ဒီဂရီအထိ အပူပေးခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဆန်းသစ်သော စိတ်ကူးတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၊ ငွေစက္ကူများသည် လူသားလက်ဖြင့် ထိလိုက်သည်နှင့် ညစ်ညမ်းသွားပါသည်။ တစ်ခုခုကို ထိတွေ့ပြီးနောက် ကျန်ခဲ့သော အဆီအကြွင်းအကျန်များကို ဘက်တီးရီးယားများက ကျွေးသည်။ အဆီများကို ဆားရည်များဖြင့် သန့်စင်ပေးနိုင်သော်လည်း Forbes မှ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဆောင်မှုသည် holograms နှင့် magnetic သို့မဟုတ် fluorescing ink ကဲ့သို့သော လုံခြုံရေးအင်္ဂါရပ်များကို ဆိုးရွားစွာ ပျက်စီးစေနိုင်ကြောင်း Forbes မှ ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ ဂျပန်ငွေထုတ် ATM စက်များကို နိုင်ငံတကာအဆင့်တွင် ကောင်းမွန်စွာ မဆောင်ရွက်နိုင်သော အကြောင်းရင်းများထဲမှ တစ်ခု ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် CO2 ကို 5,000 PSI တွင် 5,000 PSI မှ 600 ဒီဂရီအထိ အပူပေးသည့် ပိုလုံခြုံသော ငွေသန့်စင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို သိပ္ပံပညာရှင်များက တီထွင်ခဲ့ကြောင်း ယမန်နှစ်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် လေ့လာမှုတစ်ခုက ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤအဆင့်တွင်၊ ၎င်းသည် ဓာတ်ငွေ့နှင့် အရည်ကဲ့သို့ ပြုမူနေပြီး ၎င်းတို့၏ အတုအပ ဆန့်ကျင်ရေး ဆောင်ရွက်မှုများကို မထိခိုက်စေဘဲ ငွေစက္ကူများကို သန့်ရှင်းစေနိုင်သည်။ ၎င်းကို အလွယ်တကူမရနိုင်သေးသော်လည်း ပျက်စီးသွားမည့်အစား သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းဖြင့် ဟောင်းနွမ်းနေသော ငွေတောင်းခံလွှာများကို အစားထိုးလဲလှယ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ဘီလီယံပေါင်းများစွာကို သက်သာစေမည်ဟု အချို့က မျှော်လင့်ကြသည်။
Vriesekoop F၊ Russell C၊ Alvarez-Mayorga B၊ et al။ ညစ်ပတ်သောငွေ- အစားအသောက်ဆိုင်များမှရရှိသည့် ကမ္ဘာ့ငွေကြေးအချို့၏ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုအခြေအနေအား စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု။ အစားအသောက်ကြောင့်ဖြစ်စေ ရောဂါပိုးများနှင့် ရောဂါများ။ 2010
Gedik H၊ Voss TA၊ Voss A. ငွေနှင့် ဘက်တီးရီးယား ကူးစက်ခြင်း။ Antimicrobial Resistance နှင့် Infection Control ၂၀၁၃
Lawandy N၊ Smik AY။ ငွေစက္ကူ၏ သာလွန်အရည်များ သန့်စင်ခြင်း။ စက်မှုနှင့် အင်ဂျင်နီယာ ဓာတုဗေဒ သုတေသန။ ၂၀၁၃။
အသက် 12 နှစ်အောက်ကလေးများအတွက် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို ဘယ်အချိန်မှာ မျှော်လင့်နိုင်မလဲ။
FDA သည် ငယ်ရွယ်သော ကလေးများအတွက် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို မကြာမီ ခွင့်ပြုနိုင်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူများထံမှ သိရသည်။
လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ဘဲ ကိုယ်အလေးချိန် မြန်မြန်ကျအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ သင်ရှာဖွေနေသော အဖြေများအားလုံး
ကိုယ်အလေးချိန်ကျချင်ပေမယ့် Gym ဝါသနာရှင်မဟုတ်လား။ ဤသည်မှာ ချွေးမစိုဘဲ သင်၏ကြံ့ခိုင်ရေးခရီးတွင် ကူညီပေးနိုင်သည့် ထိရောက်သော အကြံပြုချက်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သည်။
ဘယ်လို COVID-19 ကာကွယ်ဆေးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ မျှော်လင့်နိုင်မလဲ။
ကာကွယ်ဆေးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက ပုံမှန်ဖြစ်ပေမယ့် အဲဒါတွေက ဘာတွေလဲဆိုတာ သိထားဖို့ လိုပါတယ်။
ကလေးတွေကို COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ဘယ်အချိန်မှာ ရနိုင်မလဲ။ ကလေးအထူးကုဆရာဝန်တစ်ဦးသည် မိဘများမေးနေသည့် မေးခွန်း ၅ ခုကို ဖြေပေးသည်။
ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်လာတဲ့အတွက် မိဘတွေနဲ့ ဆရာတွေကြား ကြီးမားတဲ့မေးခွန်းက သူတို့ရဲ့ ကလေးတွေကို COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးမယ့်အချိန်ပါပဲ။ ကာကွယ်ဆေးသည် ကလေးများအတွက်ပင် လိုအပ်ပါသလောဟု အချို့က သိချင်ကြသည်။ ဤသည်မှာ အဖြေအချို့ဖြစ်သည်။